Monopod maka Selfie - esi eji ya?
Iji melite ogo foto, ịbị onwe gị pụọ na ndị na-agafe agafe - ga-enyere ndị mọnk aka, ma ọ bụ kpọọ ndị mmadụ maka Stickie . Ọ bụ ezie na ọ dị mkpa na ngwaọrụ ahụ, ọ na-esiri ụfọdụ ndị ọrụ ike iji monopod maka selfi. Anyị ga-atụle atụmatụ nke ụdị niile - dị mfe, gbakwunye ma ọ bụ dabere na Bluetooth.
Kedu otu esi eji monopod dị mfe maka selfie?
Iji mepụta foto dị iche iche na nnukwu monopod, ị ga-achọ ịwụnye ngwaọrụ gị (ekwentị ma ọ bụ mbadamba) na ogwe aka. Mgbe nke ahụ gasịrị, smartphone na-agụnye n'ihu igwefoto. Na ngwa setịpụrụ ọnọdụ nke agbapụ agbapụ (dịka ọmụmaatụ, maka 10-15 sekọnd). A na-akwaga ekwentị na mkpịsị aka. Mgbe ịpịrị igwefoto, foto gị na-egosi na ihuenyo.
Kedu esi eji monopod maka selfie na waya?
N'adịghị ka mkpanaka nhicha onwe onye a kọwara n'elu, a na-ejikọ ekwentị na waya. A na-atụnye eriri tripod n'ime ihe a na-akpọ Jack-njikọ nke ama. Ọ dị na jaak a jikọọ isi ekweisi ọ bụla.
Ọ bụrụ na anyị na-ekwu banyere otu esi eji monopod na bọtịnụ, ozugbo ahụ, a ga-ekwupụta na otutu usoro usoro android adịghị mkpa iji wụnye ngwa ndị ọzọ mgbe ejikọtara monopod. A na-agbanye monopod ahụ site na bọtịnụ ikike na aka ahụ. Iji mekọrịta ngwaọrụ na-aga n'usoro ihe omume "Igwefoto" nke ama gị. Iji mewanye ma ọ bụ belata mbiet ahụ (dị ka "ọrụ ZOOM"), jiri bọtịnụ olu.
Kedu otu esi eji pin Bluetooth, ma ọ bụ monopod?
Na ire ere, enwekwara ikuku igwe ikuku maka ịmepụta foto kacha mma. Njikọ na nke a na-apụta na ụkpụrụ dị iche iche:
Nke mbụ, a na-agbanye mkpanaka Bluetooth na osisi Selfie, akara ahụ na-acha ọkụ na-acha anụnụ anụnụ n'oge ọrụ nkịtị.
Mgbe nke ahụ gasịrị, a na-enyere njirimara a na smartphone gị. Ikwesiri ịpị "Search", wee chọpụta aha nke monopod. A na-egosipụtakarị ya na ntụziaka.
Jikọọ na ngwa ọhụrụ.
Ọ na-anọgide na-aga ngwa "Igwefoto". Njikwa igwefoto na-apụta mgbe bọtịnụ na aka nke mkpịsị aka na-arụ.
Maka ụfọdụ smartphones, ụzọ a kọwara n'elu adịghị adabara. Maka njikọ zuru oke nke monopod, ị ga-ebudata otu n'ime ngwa a chọrọ na ụlọ ahịa ahụ (Ụlọ Ahịa ma ọ bụ Play Market). Ọ na-enye aka ijikọta gam akporo na mkpanaka maka onwe onye na ikpe ebe ọ naghị arụ ọrụ.
Kedu otu ị ga - esi họrọ ọcha ụlọ ikuku maka ụlọ?
Kedu otu esi ahọrọ oghere maka DSLR - otu esi ahọrọ oghere maka ọrụ gị?
Ahịhịa maka ire
Kedu esi jikọọ monopod?
Ngwongwo silik maka cupcakes
Ụdị maka achịcha achịcha
Afọ ole ka mụọ mmadụ malitere?
Esi esi esi nri ọka wit?
Kedu ka esi esi ngwa ngwa esi nri bekee n'ime igwe onyonyo?
Kedu otu esi agu nri nke oma iji welata ibu?
Kpoo mmerụ ahụ
Anna Sedokova ghọrọ onye ọhụrụ nke Antonio Banderas
Mkpụrụ fig na syrup mmanya - dị ụtọ dessert
Kedu ihe m ga-enye maka Afọ Ọhụrụ?
Ultrasound nke arịa nke n'olu
Patchwork quilt - nnabata klas
Ngwá isi maka ime windo